नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा १ करोड ५० लाख कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको अरुण काबेली पावर लिमिटेडको बजार पूँजीकरण रू. २ अर्ब ४४ करोड ५० लाख छ । दोस्रो बजारमा आइतवारको कारोबारमा कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १६३ कायम भएको छ । कम्पनीले व्यावसायिक योजनाअनुरूप २५ मेगावाट क्षमताको काबेली बी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ६२ करोड ६४ लाख १९ हजार खुद नाफा गरेको थियो । सोमवारको कारोबारमा २ हजार १९१ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो । यस दिन कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १७१ कायम भएको छ ।
कम्पनीको ६३ दिनको कारोबार अवधिलाई लिएर गरिएको मैनबत्ती विश्लेषणमा अन्तिम दिनमा कालो मैनबत्ती आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य आगामी दिनमा घट्ने संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ५४ दशमलव ८५ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ४ दशमलव ८९ विन्दुमा छ ।
2019-04-23 - 100 view(s) - abhiyan